मनमा कुण्ठा पाल्नु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक ! - Naya Pusta
मनमा कुण्ठा पाल्नु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक !
Naya Pusta २०७४ चैत्र ९ गते प्रकाशित
कुनै कुरालाई लिएर लगातार कुण्ठित रहिरहनु तथा चाहरेर पनि केही गर्न नसक्नुको स्थितिमा लामो समयसम्म रहियो भने खतरनाक स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्छ। यो विषयमा भएका अनेकौं शोध एवं अध्ययनबाट के स्पष्ट भइसकेको छ भने मन-मस्तिष्कमा भरिएर रहने यस्तो गथासोले लामो समयसम्म उपयुक्त निकास पाउन सकेन भने गम्भीर स्वास्थ्य समस्याले सताउने कुरामा कुनै शंका रहँदैन।
यसकारण विषरूपी मनको कुण्ठा भित्रै जम्मा भइरहन दिनुहुँदैन, बिस्तारै-बिस्तारै बाहिर निकाल्नुपर्छ । स्वस्थ रहनका लागि मनको कुण्ठा बेलाबेलामा निकालिरहनुपर्छ। घर तथा अफिसको कामको दबाब, बोस वा शिक्षकको गाली, साथीभाइसँगको झगडाजस्ता हरेक समस्याबाट सिर्जित तनावलाई मनभित्र जम्न नदिई बाहिर निकालिरहनु एकमात्र उपाय हो।
कतिपय अवस्थामा यस्तो स्थिति रहन्छ कि मानिसले तीव्र चाहना हुँदाहुँदै पनि आफ्नो क्रोध व्यक्त गर्नका लागि मारपिट गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सराप्दा मनमा आनन्द र शान्तिको अनुभव हुन्छ। यो कुरामा विश्वभरका मनोवैज्ञानिकका बीच मतैक्य पाइन्छ।
विरोधी, शत्रु वा मन नपर्दो मान्छे सदैव आफ्नो अगाडि हुन्छ भन्ने छैन र छ भने पनि उसैका अगाडि उसलाई गाली गर्दा वा रिसाहापन प्रदर्शित गर्दा स्थिति झन् खराब बन्नसक्छ । यसकारण उसको सट्टा उसकै प्रतिरूप पुतला वा प्रतीक चिह्न आदिमाथि क्रोध व्यक्त गर्दासमेत काम बन्नसक्छ किनभने त्यसलाई गाली गर्दा वा सराप्दा समेत क्रोध शान्त हुन्छ।
एक जानकारीअनुसार जापानमा ठूल्ठूला कम्पनी तथा कार्यालयहरूमा यस्तो विशेष कक्षको व्यवस्था गर्ने चलन छ जहाँ एउटा पुतला हुनेगर्छ। जब कुनै कर्मचारीलाई आप्mनो कुनै सहकर्मी, हाकिम वा अन्य कुनै व्यक्तिका कारण क्रोध पैदा हुन्छ वा तनाव बढ्छ तब उसले त्यही पुतलालाई मनपरी गाली गरेर तथा कुटेर क्रोधलाई निकास दिन्छ।
कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सँगै बसेर, आपसमा मज्जासँग खुलेर कुरा गर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाएका हुन्छन्। यसो गर्नुपछाडिको उद्देश्य उद्देश्य यही हुन्छ कि कसैको मनमा कुण्ठा, गुनासो, रिस, तनाव आदि छन् भने कुराकानीका क्रममा त्यो बाहिर आओस् र उसले तनावमुक्त भएर काम गर्न सकोस्।
सुन्दा आश्चर्य लाग्नसक्छ । तोडफोड गरेर पनि मानसिक सुखशान्ति प्राप्त हुनसक्छ, तनावबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा जीवनलाई सहज बनाउने कुनै कुराहरूले नै मानिसमा तनाव सिर्जना गर्छन् यसकार त्यो तथा त्यसजस्ता अन्य चिजहरूमाथि गरिने तोडफोडले मनमस्तिष्कलाई आराम दिएको अनुभव हुन्छ । केही समय पहिले साइकोलोजिकल बुलेटिनमा पनि ड्यामेज थेरापीको बारेमा बताइएको थियो।
स्पेनको एक कबाडी कारखानामा मासिहरूलाई तोडफोड गर्ने वातावरण मिलाएर सेवा दिन थालिएको छ । मूल्य छ दुई घन्टाको चार हजार रुपैयाँ । त्यहाँ तनाव कम गर्नका लागि टिभी, कम्प्युटर, फ्रिज, कार, स्कुटर, बाइक, मोबाइल फोन, घरेलु सामान आदिलाई रिस नमरुन्जेल तोडफोड गरेर मानसिक शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ।
तनाव हटाउने यो उपायबाट बिरामीहरूलाई कति फाइदा पुग्ला त भन्ने प्रश्नको जिज्ञासामा ‘स्टप स्ट्रेस’ नामक एक कम्पनीले के दाबी गरेको छ भने उपचारको दुई घन्टे समयमध्ये आधा घन्टामै बिरामीले आराम महसुस गर्नसक्छ । यसरी आफ्नो कुनै पनि शत्रु वा आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिको पुतलामा लात्तीमुड्की बजारेर स्वास्थ्यलाभ गर्न सकिन्छ।
गगन थापाको अर्को घोषणा : आजबाट कान्ति बाल अस्पतालमा शिशुको उपचार नि:शुल्क
प्लास्टिकका पोकामा सय बढी शव, व्यवस्थापनमा छैन कसैको चासो